Maxaa u dambeeyay xiisadda ka taagan Guriceel ? | Radio Hormuud
Rasaas goos goos ah ayaa laga maqlayaa qaybo ka mid magaalada Guriceel oo shalay ay ku dagaallameen ciidamada maamulka Galmudug oo kaashanaya kuwo dawladda federaalka iyo ciidammo taabacsan ururka Ahlu Sunna.
Dagaalkii shalay waxaa ka dhashay khasaare ba'an, iyada oo haatanna labada dhinac ay wada joogaan magaalada.
Ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay halka 40 qof ay ku dhawaacmeen dagaalkii cuslaa ee shaley Guriceel ku dhexmaray ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlu Sunna, sida laga soo xigtay ilo wareedyo caafimaad iyo kuwa ciidanba.
Saraakiisha ku dhintay dagaalka waxaa kamid ahaa taliyihii ciidamada Danab ee Galmudug iyo saraakiil kale oo ka tirsan Ahlu Sunna.
Xaaladda magaalada Guriceel ayaa saaka deggan inkasta oo la maqlayo rasaas goos goos ah, dadka deegaanka ayaa ka cabsi qabaa in xilli kasta uu dagaal ka qarxi karo halkaas.
Dagaalkii xoogganaa ee shaley dhacay wuxuu keenay in dadkii yaraa ee fara ku tiriska ahaa ee magaalada ku haray inay isaga qaxaan halkaas iyadoona saaka ay magaalada cidlo tahay.
ilaa hadda wax waanwaan ah oo laga dhex wado laba dhinac mana jiraan.
Shaley ayay aheyd markii magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ay ka dhaceen iska hor'imaadyo hubeysan oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo kuwa Ahlu-Sunna Waljamaaca kaas oo ka socday xaafado ka tirsan magaalada.